Dad loo qab qabtay weerarkii lagu dilay Macalimiinta - Awdinle Online
Dad loo qab qabtay weerarkii lagu dilay Macalimiinta
Ciidamada Amniga ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen in ka badan 40-ruux oo lagu tuhmayo inay ku lug leeyihiin xasuuqii Macalimiinta loogu geystay Tuulada Koogaar ee Gobolkaasi Khamiistii la soo dhaafay.
Guddoomiye xigeenka dib u heshiisiinta iyo arimaha Federalka ee G/Sh/dhexe Maxamed Tooxoow Cabdi ayaa sheegay in weli laamaha Amniga dowladda Federaalka iyo Maamulka Hir-Shabeelle ay ku guda jiraan weerarka lagu dilay Shanta Macalin.
Waxaa uu ka codsaday ehellada dadka la waayay inay ka warsugaan Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Dowladda, isla markaana dadkii ka dambeeyay falkaasi dhawaan cadaaladda la horkeeni doono.
Macalimiinta la xasuuqay oo ku sugnaa Tuulada Koogaar oo ku taalla inta u dhaxeysa degmooyinka Cadale iyo Raaaga Ceelle ayaa sababaha loo dilay waxaa lagu sheegay aanooyin qabiil oo waayadaan ka jiray Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Previous articleShil Diyaaradeed oo ka dhacay Garoonka Aadan-Cadde
Next articleDowladda oo ka hadashay Diyaaradda ku dhacday Garoonka Aadan-Cadde